Apple’s iPhone SE 2 wuxuu noqon doonaa taleef aan qofna runtii dooneynin - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Apple’s iPhone SE 2 wuxuu noqon doonaa taleef aan qofna runtii dooneynin
Apple’s iPhone SE 2 wuxuu noqon doonaa taleef aan qofna runtii dooneynin
Nasiib wanaagse, Apple wuxuu ka shaqeynayaa qofka guuleysta ee loo yaqaan 'iPhone SE'. Akhbaarta xun ayaa ah in aaladda, ugu yaraan sida ay sheegaan qaar ka mid ah wararka xanta ah ee ugu wareegaya, aysan noqon doonin qalab loogu tala galay isticmaaleyaasha iPhone SE.
In kasta oo wararka xanta ah ee Apple ay xamaasad saarayaan, falanqeeyayaasha Ming-Chi Kuo sanadihii la soo dhaafay waxay si aan caadi ahayn uga muuqdeen saadaalintiisa. Dhawaan, Kuo wuxuu daabacay a qoraalka qoraalka ah taasoo muujineysa in Apple’s iPhone SE 2 uu ka faa'iideysan doono qaab la mid ah kan iPhone 8, oo leh shaashad dhererkeedu yahay 4,7 inji. Intaa waxaa dheer, iPhone SE 2 wuxuu soo bandhigi doonaa dareeme taabasho ah "ID ID", processor-kii ugu dambeeyay ee Apple A13 iyo kamarad muraayad kaliya ah oo dhabarka ku jirta.
Waxay u muuqataa mid weyn, laakiin iPhone SE 2 waxay yeelan doontaa qaab. Arrin la mid ah tii iPhone 8. Soo jiidashada ugu weyn ee "iPhone SE" waa in la siiyaa dadka isticmaala aaladaha horumarsan qaab qaabaysan, waana wax sii adkaanaya in la helo halka shirkadaha sida Apple ay sii wadaan soo saarista aaladaha leh shaashadaha gargantuan. The iPhone SE 2 waxaa asal ahaan lagu qeexay shaashadeeda inch ah ee '4 inch iyo qaabkeeda is haysta, waana naqshad ka dhigaysa aaladda si cajiib ah in hal gacan lagu isticmaalo.
Haddii warbixinta Kuo ay sax tahay, taasoo dhif ah. Tusaale ahaan, falanqeeyayaasha qaarkood waxay rumeysan yihiin in iPhone 8 ay gacan ka geysan doonto kor u qaadista iibinta iPhone ee 2020, maadaama macaamiisha wali isticmaalaya moodooyinka iPhone 6 iyo 7 ay soo jiidan doonaan. qiimaha hoose ee iPhone SE 2.
Waa tan dhibaatada, si kastaba ha noqotee; iPhone 8 ayaa durbaba lagu heli karaa qiimo wanaagsan. Haddii macaamiisha ay raadinayaan ikhtiyaar casriyeyn ah oo la awoodi karo, horeba way u jirtay. Ilaa iyo inta aan ogahay, waxay umuuqataa in Apple ay si fudud uga fiirsaneyso kor u qaadida iPhone 8 oo ay kujirto waxyaabo gudaha ah oo casri ah iyo kamarad horumarsan. Aynu kaliya sheegno in tani aysan ahayn qalab u qalma naaneyska "iPhone SE 2".
Sanadihii la soo dhaafay, taageerayaal badan oo ka tirsan 'iPhone SE' waxay ku riyoodeen aalad compact ah oo leh qaab gees-ka-gees ah, oo lamid ah tan ay soo bandhigtay Apple oo leh iPhone X oo lagu muujiyey fikradda hoose.
Nasiib darrose, haddii iPhone SE 2 uu ku qalabeysan yahay "ID ID", waxaa loo maraa iyada oo aan la dhihi doonin arki mayno naqshad jilicsan oo leh gees gees shaashad ah, laakiin halkii iPhone 8 cusboonaysiin leh rafcaan xaddidan.
Asalka 'iPhone SE' ee asalka ah ayaa buuxiyay farqiga khadka Apple ee wax soo saarka, waana wax laga naxo in la arko Apple oo gebi ahaanba dayacday sababihii keenay iyaga afar sano hadda. Waxa tan ka dhigaya kuwa sii yaab badan ayaa ah in iPhone SE uu cadeeyay inuu aad uga jecel yahay xitaa Apple xitaa mala awaali lahaa.
"Waan ku faraxsanahay jawaabta aan aragnay," ayuu Tim Cook ka yiri iPhone SE. inta lagu gudajiray teleconference ku saabsan natiijooyinka 2016. "Way iska cadahay inay jirto baahi, xitaa wixii aan ka fikirnay."
Baahida ayaa ahayd natiijada qaabka, ma ahan qiimaha. Waxaan rajeyneynaa Apple inay ka mahadcelin doonto taas oo ay bixin doonto iPhone 2 SE oo ay macaamiisha runtii rabi doonaan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://bgr.com/2019/10/09/iphone-se-2-release-features-display/
Mid ka mid ah barnaamijyada Google ee ugu caansan waxay ugu dambeyntii ku dhici kartaa xaalad mugdi ah
Jiilka cusub ee PlayStation VR oo loogu talagalay PS5 ayaa laga yaabaa inay soo daatay